Su'aalaha La Weydiiyo - Nanchang Eco Products Products Co., Ltd.
1. Sideen ku heli karaa oraah?
--Naxariis na siiso faahfaahintaada codsi (qaabka, astaanta, cabbirka, midabka, tirada, iwm), nooga tag baaritaan ama emayl si dhaqso leh ayaan uga jawaabeynaa!
2. Sidee loo helaa muunad bilaash ah?
-Waxaan ku siin karnaa shaybaarradeena la midka ah ee bilaashka ah si aan u hubino qaabka iyo tayada!
--Fudun oo leh astaantaada, khidmadda caaryada ayaa lagu soo oogi doonaa saldhig ku saabsan faahfaahinta.
3. Sidee loo bixiyaa amar?
--T / T, midowga reer galbeedka, lacag garaynta
Xaqiijinta ganacsiga internetka ee Alibaba: Boleto, Mastercard, Visa, e-Checking, Pay Later, L / C, ect.
4. Sideen ku aamini karaa adiga iyo shirkadaada?
--Waxaan nahay shirkad dahab ah oo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan alibaba, waxaan diiradda saareynaa xiriirka muddada fog ee aan la leenahay macaamiisha, waxaan la shaqeynay kumanaan macaamiil ah tan iyo markii shirkaddu dhistay 12 sano ka hor, macaamiisha had iyo jeer waxay sameeyaan hadalo aad u sarreeya
5. Waa maxay nidaamka amarku?
--Soo dir su'aalaha → helitaanka oraahda → lacag bixinta → naqshadeeye deisgn sawirka oo kuu soo diro adiga si aad u ogolaato
6. Goorma ayaan filan karaa in badeecada la hagaajiyay la dhammaystiro?
Muunad: 7-10 maalmood oo shaqo (Heerka).
Amarka Jumlada: 20-25 maalmood oo shaqo (Heerka).
7.Ma dammaanad qaadeysaa gaarsiinta alaabada ee aaminka ah?
8.How ku saabsan khidmadaha rarka?
9.Diritaanka & Rarista
Maraakiibta hawada, Couirer (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, ect), Shixnad Badeed (FCL / LCL).